Fanjakana malagasy : “Arahi-maso akaiky ny raharaha” | NewsMada
Fanjakana malagasy : “Arahi-maso akaiky ny raharaha”
Manara-maso akaiky ny fivoaran’ny raharaha ary tsy mitsaha-mifandray amin’ireo manampahefana afrikanina tatsimo ny fitondram-panjakana malagasy, araka ny fanambaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, ny faran’ny herinandro teo, momba ny “Raharaha volamena 73,5 kilao”. Amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny izay fanaraha-maso izay.
Momba ny raharaham-pitsarana tamin’ny 12 janoary: nolavin’ny fitsarana ao Kempton Park ny fangatahana fahafahana vonjimaika ireo voampanga izay nataon’ny mpisolovava azy ireo. Fanondranana antsokosoko harena sarobidy sy fandikana ny lalàn’ny fadintseranana afrikanina tatsimo ny iampangana azy ireo. Nanapa-kevitra ny fitsarana any an-toerana fa hahemotra amin’ny 1 febroary ny fotoam-pitsarana momba izany.
Araka izany, tsy misy ifandraisana ny fanenjehana ireo voampanga nandika lalàna afrikanina tatsimo, izay nataon’ny fitsarana any an-toerana, natao ny 12 janoary lasa teo ary hitohy ny 1 febroary ho avy izao, andaniny; ankilany, ny fangatahan’ny fanjakana malagasy ny hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo olona telo voampanga amin’izany.
An-dalana ny fandinihana ny fangatahana
Natolotry ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy an-tanana ny ambasadaoro afrikanina tatsimo miasa sy monina eto Madagasikara, ny10 janoary, ireo antontan-taratasy fangatahana fampiharana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ny amin’ny hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo olona telo voasaringotra amin’io raharaha io izany.
Nampitain’ny masoivoho amin’ny departemantan’ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny afrikanina tatsimo izany fangatahana izany. Izay kosa no nanolotra azy tamin’ny tomponandraikitra fitsarana mahefa any an-toerana. Efa eo an-dalam-pandinihana izay fangatahan’ny fanjakana malagasy ry zareo amin’izay amin’izao fotoana izao.